पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला : कसले के भने ? - Deshko News Deshko News पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला : कसले के भने ? - Deshko News
पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला : कसले के भने ?
प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले सङ्घीय संविधानको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्दै मुलुकको समृद्धिका लागि प्रदेशहरू बलियो बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधानले अवलम्बन गरेका सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसके पनि सङ्घको मानसिकता नबदलिएको बताउँदै उहाँले सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रहरी प्रशासन एवं कर असुलीलगायतका विषयमा अझै पनि प्रदेश सरकारलाई अधिकार नभएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।